Umatshini woNyango lwe-Cryogenic we-Molds
I-Stem Cell, iBhanki yegazi kunye ne-Bio-bank
Ulwelo lweNitrogen ye-Ice Cream Isixhobo
Ngophuhliso kunye nokuvuthwa kweteknoloji yobushushu obuphantsi, ngakumbi nangakumbi abavelisi bakhetha initrogen engamanzi ukupholisa iimbumba zabo zesinyithi. Inokunyusa ukuqina kunye nokuqina kweemela kunye nezinye iimbumba zeemveliso nge-150%, okanye nokuba yi-300%, ukuphucula umgangatho wemveliso kunye nokugcina iindleko zemveliso.
SJ600 series izixhobo ezikrelekrele cryogenic ziyilwe yinkampani yethu ngokweemfuno zabathengi. Inkqubo iquka inkqubo yokungenisa umoya, inkqubo yokungenisa umoya oshushu, inkqubo yokugcina initrogen engamanzi kunye nenkqubo yokulawula ekrelekrele. Inkqubo ithatha iteknoloji yamva nje ye-elektroniki kunye nolwelo nitrogen lobushushu ubuchwepheshe ukusasazwa, kunye nokupholisa, ubushushu rhoqo kunye neenkqubo zokufudumeza ziyafana kwaye uzinzile. Iimveliso zinokuthi ziyilwe ngokuthe tye, ngokuthe nkqo, uxande, i-cylindrical kunye nezinye iinkcukacha, kwaye ziyilwe kwaye zenziwe ngokweemfuno zomthengi.
● Isixhobo senziwe ngentsimbi yokutya-ibakala lokutya, kwaye inxalenye yomatshini iqiniswe ngokukodwa;
● Umphezulu ogqunywe ngumgubo, imibala eyahlukileyo iyakhethwa;
● Umaleko okhethekileyo wokugquma unokuthintela ngokufanelekileyo ukutshintshiselana kobushushu phakathi kwenqanawa yangaphakathi kunye neqokobhe langaphandle.
● Uyilo olukhethekileyo lokuvula isiciko ngokulula.
● Uxhotyiswe ngeqhosha elikhethekileyo lomnyango ukuqinisekisa ukutywinwa okupheleleyo kunye nokutshixa okuthembekileyo;
● Kukho ii-base rollers zokuqinisekisa ukuba umhlaba awunakonakala;
● Uthungelwano olunamandla othungelwano, zonke izixhobo zinokudityaniswa kunye; (ukhetho)
● Ubungakanani kunye nomthamo unokuyilwa ngokwemfuno yomthengi;
● Ujongano lwekhompyutha olusebenziseka lula; kulula ukusebenza.
1.SJ CRYO kuphela kwenkampani enokubonelela ngenkqubo epheleleyo yolwelo lwenitrogen egcina iisampulu zebhayoloji eTshayina. Sinazo iipatent zei inkqubo yonke; siyila, siphuhlise kwaye sivelise inkqubo yonke ngokwethu.
I-2.Inkqubo yonke ibandakanya inkqubo yokuzalisa initrogen yolwelo (itanki enkulu yenitrogen yolwelo, umbhobho we-cryogenic kunye nenkqubo yokudlulisa ulwelo lwe-cryogenic), inkqubo yokugcina isampula (intsimbi engenanto yebhayoloji ye-nitrogen yesikhongozeli, isikhongozelo sokuzalisa initrogen kunye nezincedisi), kunye nenkqubo yokulawula (ukubeka iliso). isoftware, ulawulo lwesoftware kunye Ubomiinkqubo yokulawula ukhuseleko lwebhanki ).
3.Iimveliso kunye neenkqubo zethu zingaphaya kweemveliso zangaphandle kubuchwepheshe obungundoqo, ukusebenza kakuhle kweendleko kunye nenkonzo yasemva kokuthengiswa.
I-SJ CRYO idibanisa kunye nemeko yophuhliso loshishino lwe-ayisikrimu kwi-liquid nitrogen ice cream umatshini wokuzalisa i-ice cream kulula ukuyisebenzisa kunye neenzuzo zeendleko eziphantsi.
Ngophuhliso loluntu, ukwanda kwemfuno yabantu ye-ayisikrimu kunye neziselo ezibandayo zokunambitha okungcono. ingakumbi ulwelo nitrogen ice cream yenza uphuhliso olungaphezulu kushishino. Nokuba incasa ye-ice cream yenitrogen okanye umoya womsi unika umdla ngokwenene ebantwini.
Ulwelo lwe-ayisikrimu yenitrogen kunye neziselo ezibandayo ziye zaziwa kakhulu kwindawo ethile, kodwa ziqala nje kwenye indawo. Isizathu asikho ngaphantsi kwexabiso lemveliso yangaphandle kunye nophuhliso lwale mveliso lubiza kakhulu, emva kokunikezelwa kuthi, ixabiso layo libiza kakhulu.
Initrogen yolwelo ifumaneka emoyeni ukufumana i-non-toxic, inert kwaye ayisebenzi kunye nezinye izithako ngaphakathi kwe-ayisikrimu. Ngethuba lenkqubo yokukhenkceza, i-ice cream ekrwada ijikelezwe yi-nitrogen ukunciphisa ukudibanisa nomoya, phantse akukho kuguqulwa kwe-oxidation kunye ne-fat rancidity, ukuphelisa iphunga leoli elibangelwa yi-oxidation. Ukunciphisa ngokukhawuleza kweqondo lokushisa kunokunciphisa i-biochemical reaction ye-ayisikrimu kunye nokunciphisa uchungechunge lwe-metamorphism ebangelwa yi-enzyme; ulwelo nitrogen kwiibhaktheriya kunye nezinye microorganisms kwakhona ukufuthanisela kunye nesithintelo, kwaye ngcono ukugcina ice cream yoqobo kunye neziselo ezibandayo freshness, umbala Ivumba kunye nexabiso layo lesondlo.
● Incasa entle
Ukwenza i-ayisikrimu usebenzisa umkhenkce wenitrogen elulwelo, ubushushu obuphantsi -196 ℃ unokukhawuleza wenze imathiriyeli yekristale, kwindawo yokukhenkceza ngokukhawuleza. Ulwelo lwenitrogen lulwelo kwaye lunokuba lunxibelelwano olusondeleyo kunye nazo zonke iinxalenye zokutya okumilo ngokungaqhelekanga, ukuze ukuxhathisa ukuhanjiswa kobushushu kuncinci; njengeqokobhe leqanda lizinzile kwisondlo sezondlo. I-ayisikrimu ngaphakathi kwekristale yomkhenkce encinci kunye neyunifomu, yitya kakuhle ngokwendalo kwaye ungabi nemvakalelo erhabaxa.
● Ukumila kakuhle
Itshokholethi kunye ne-ayisikrimu efana nekhrim eveliswa yi-nitrogen yolwelo, ngenxa yexesha lokunxibelelana ngokuthe ngqo phakathi kwetshokholethi engaphezulu kunye ne-nitrogen engamanzi lifutshane kakhulu, iqondo lobushushu lokugquma itshokolethi lisezantsi kakhulu kunobushushu be-ayisikrimu yangaphakathi, ukwanda kwe-thermal kunye. ukucutheka kwetshokholethi Ihlanganiswe ngokuqinileyo kwinqanaba langaphakathi le-ayisikrimu, ukwenzela ukuba umaleko wangaphandle ungabi lula ukuwukhupha. Kwangaxeshanye, ngenxa yokukhenkceza kwenitrogen yolwelo, iqondo lobushushu eliphantsi kakhulu, itshokolethi kunye nobulukhuni bekhrimu buphezulu, inkangeleko yokwaleka yesikhumba igudileyo kwaye igudileyo, ayivelisi ukunyibilika, ukudibanisa kunye nokuqhekeka komphezulu, ukuphalaza njalo njalo, umkhenkce wenitrogen. Iimpawu zomgangatho wekhrim zokuziva Ungcono kakhulu kunezixhobo eziqhelekileyo zokukhenkceza iimveliso ezikhenkcezisiweyo.
● Ukuzalisa izixhobo ngaphandle kombane, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi;
● umzimba wentsimbi engatyiwa;
● Isakhiwo sokukhulula ngokukhawuleza, kulula ukudibanisa;
● Isifunxa esiphakamileyo se-multi-layer insulation, ulwelo oluphantsi lwenitrogen emphunga;
● Ulawulo lomatshini, izinga lokungaphumeleli eliphantsi;
● Uxinzelelo lokukhupha luphantsi, ukhuseleko oluphezulu;
● Imilomo yokucoca iyakwala ukungcola;
● I-Universal brake casters ukuququzelela indawo encinci yokuhamba;
● Ubude bukhululekile ekusebenzeni;
● Inokuphuculwa kulawulo lombane;
● Ibha inokwenziwa ngokwezifiso phantsi kwekhabhinethi;